Erayo Macaan: Baro erayo macaan oo ay naftu u riyaaqdo
Jaceylka waa furaha nolosha
Naftu waxa ay u baahan tahay erayo macaan, jaceylku waa furaha nolosha, noloshu waxa ay u baahan tahay farxad marka erayadani waxa ay kuu sahlayaan ama ay farxad gelinayaan lamanahaaga ama qofka aad adigu jeceshahay. Ogow hadalka macaan waa qeyb kamid ah nolosha, waxa uuna dhisaaa qalbiga isuna soo dhaweeyaaa lamaanaha.
Jaceyl aan erayo macaan wadanin waaa sida shaax aan sokor lahayn oo kale , marka ha iloobin in aad isticmaasho erayo macaan oo soo jiidasho leh xili walbaaa, shukaansi ama guurka kadib xitaaa. Erayadani waxa ay kuu sahlayaaan in aad badasho dareenka qoftaada ama qofkaaada, hadii aad tihiin jaceyl wadaag ama qoys.
Waxaan kuu diyaarinay Erayo macaan oo aad adeegsan karto xili walbaaa...
Waxaan jeclahay inaan arko adigoo faraxsan, waxa ugu quruxda badan ee aan arkana waa dhoolacadeeyntaada.
Waan ku jeclahay anigoo ku dhahay ayaan misana kuu sheegin dareenkeyga waayoo waa mid aanan erayo ku cabiri karin, kaliya waxaad ku ogaan kartaaa adigoo qalbigeeyga dilaaciyo misana fiiriyo waxa kuugu jiro .
Hadii aad ogaan lahayd jaceylka aan kuu qabo dhabtii waad ilmeyn lahayd waxaadna iga codsan lahayd in aan laabta ku galiyo.
Tan iyo wakhtigii aan kula kulmay, wax yar ayaan ooyaa, wax yarna waan  qoslaa oo dhoola caddeeyaa, sababtoo ah adiga ayaan ku heystaaaa oo nolosheyda waa mid dhameystiran.
Maalin kastaa oo aan adiga kula joogo waa wax cajiib ku ah nolosheyda, sababtoo ah waxa ay nafteydu diyaar u tahay safarka dheer in ay adi kula qaadato.
Mararka qaarkood waxaan dib uga fikiraaa markii  ugu horeysay ee aan indhaha ku saaray, in aan helay qof cajiib ah, tan iyo waqtigaas qalbigeygu waxaad u tahay iftiin, indhaheyguna nasteexo.
Hal qoraal oo dhinacada ka socdo wuxuu badalay jihadeeyda.
Kaliya waxaan ku arkay ilbiriqsi laakin aragtidaadi ayaan iftiinsadaa.
Arinta ugu culus ee aan waligeey ku fikiri doonin waa iloowidaada.
Waxaa tahay nolosheyda, waxaa tahay iftiinkeyga, waxaa tahay qalbigeyga.
Saddex tilaabo oo dhameeystiri karta farxada, 1) Adiga 2)Aniga 3)Labadeena qalbi oo wada jir ah.
Jaceylka aan kuu qabo ma dhamaado, La’aantaa manoolaan karo, Aad ayaan kuu jeclahay.
Wax walbo ayaa ii tahay, Adaa ileh,  Waan ku jeclahay, waana ku jeclaan doono.
Ma jiro wax ka qurux badan in aan adiga laabta ku galiyo, dhinacaada bidixna ka soo kaco.
Hadii aan indhaha isku qabto, adiga ayaan ku arkaa,hadii aan kala furana adiga ayaan kuu xiisaaa.
Naftu waxaa u qaali ah ruuxii ay jeclaato